girls Archives - For Her Myanmar
(ယောကျစစ်ဟုဖတ်ပါ။) ပုရိသတို့ မဖတ်ရ။ တူတူအိပ်ကြည့်စရာ မလိုပဲ ယောကျာ်းစစ်မစစ် သိနိုင်မည့် နည်းလမ်း👇👇👇 ကမ္ဘာ့လူဦးရေ စစ်တမ်းအရ ယောကျာ်းဦးရေသည် မိန်းမဦးရေထက် နည်းပါးသည်။ရပါသည်။ ကိစ္စမရှိပေ။ ယောကျာ်းဦးရေနည်းပါးသည့်ကြားကပင်…
ပျိုမေတို့ရေ… ခေတ်နဲ့အညီ ဝတ်စားတတ်ဖို့ အရောင်ရွေးချယ်တတ်ဖို့လည်းလိုမယ်နော်။ ဖက်ရှင်ပညာရှင်တွေပြောထားတဲ့ ဒီနှစ်မှာခေတ်စားမယ့် အရောင်(၁၀)ရောင်ကတော့……. ခေတ်ကာလအလျောက် ပြောင်းလဲနေတဲ့ ဖက်ရှင်သံသရာဝယ် ဖက်ရှင်ရဲ့ အဓိကဇာတ်ဆောင် အရောင်တွေဟာလည်း နှစ်အလိုက် ပြောင်းလဲလျက်ရှိပါတယ်။…
ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ လှပနေစေဖို့ မိန်းကလေးတိုင်းမှာရှိသင့်တဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်း (၁၈)မျိုး
၁၈ မျိုးဆိုလို့ များတယ်ထင်နေပါသလား..? အကုန်မရှိမဖြစ်ပါပဲ။ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ.. “သမုဒ္ဒရာ ဝမ်းတစ်ထွာ”တဲ့။ ဝမ်းဗိုက်ဟာ ဘယ်တော့မှ ပြည့်တယ်ရယ်လို့ မရှိသလို မိန်းကလေးတွေရဲ့ လှချင်ပချင်စိတ်ကလည်း ဘယ်တော့မှ မကုန်ပါဘူး။(အစားသမားမို့…
မျက်နှာလေး ကြည်လင်ဝင်းပစေဖို့ လိုက်နာရမယ့် အဆင့်(၅)ဆင့်
မှန်ကြည့်လိုက်တိုင်း အသားအရေညစ်နေလို့ စိတ်တိုင်းမကျဖြစ်ရတယ်ဆိုရင် ဒီနည်းလမ်းလေး ဖတ်ကြည့်ပါ။ အပြင်ထွက်ရတာများတဲ့ပျိုမေတွေအဖို့ တစ်နေ့တစ်နေ့ နေဒဏ်လေဒဏ်တွေခံရတဲ့အခါ အသားအရေတွေ ပျက်စီးရပါတယ်။ အဲ့တော့ အသားအရေက မကြည်မလင် ၊ညစ်နေပါတယ်ဆိုမှ မိတ်ကပ်ထပ်လိမ်းတော့…
ဝိတ်မတက်ဘဲ ရင်သားကြီးထွားစေမည့် နည်းလမ်းများ
ရင်သားကြီးဖို့ကြိုးစားရင်း ဝိတ်တက်လာပါသလား???? ရင်သားကြီးထွားဖို့ကြိုးစားရင်း ပြဿနာတစ်ခု ကြုံလေ့ကြုံထရှိတာက ကိုယ်အလေးချိန်ပါတက်လာတာပါပဲ။နောက်…..ကိုယ်အလေးချိန်ကို လျှော့ချရင် ရင်သားပါ ပုံပျက်သွားနိုင်မလားစိုးရိမ်ကြရပါတယ်။ ရင်သားက ဘယ်လောက်ပဲ အဆီနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုပါစေ၊သူ့ဘေးတစ်ဝိုက် ကြွက်သားတွေရဲ့ အကူအညီနဲ့ဆို ကျစ်လျစ်နေမှာ…
ငယ်ငယ်တုန်းက ဘာဘီရုပ်ကလေးတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းလာရတဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါ ဉာဏ်ကောင်းပြီး ဖျတ်လတ်သူတွေဖြစ်လာကြတယ်။ ဘာဘီရုပ်တွေနဲ့ ဆော့ကြတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လူကြီးတစ်ယောက်လိုမျိုး တွေးခေါ်တတ်ကြပါတယ်။ အရုပ်တစ်ရုပ်ထက်ပိုတဲ့ ခံစားမှုနဲ့ ထမင်းမေ့…